मधेशमा कसले गर्‍याे प्रधानमन्त्री ओलीको पुत्ला दहन, ब्यापक रुपमा प्रहरी परिचालन! -
मधेशमा कसले गर्‍याे प्रधानमन्त्री ओलीको पुत्ला दहन, ब्यापक रुपमा प्रहरी परिचालन!
२६ कार्तिक २०७५, सोमबार १७:३१ 596 पटक हेरिएको
काठमाडाैँ । महोत्तरी जिल्लाको सदरमुकाम जलेश्वरमा काङ्ग्रेसको भातृ सङ्गठन नेपाल विधार्थी संघले प्रधानममन्त्री केपी शर्मा ओलीको पुतला दहन गरेको छ ।
तपेश्वर उच्च माध्यामिक विद्यालय काभ्रेका ईकाइ अध्यक्ष कृष्ण ढकाललाई विनासर्त प्रहरीले रिहा नगर्दा प्रधानममन्त्री ओलीको पुतला दहन गरिएकाे संघका अध्यक्ष नैनसिंह महरले बताए। सोमबार जलेश्वरको महेन्द्र चोकमा नेवि संघको सचिव नवीन झाको अगुवाईमा प्रधानमन्त्री ओलीको पुत्ला दहन भएकाे हो ।
प्रधानमन्त्री ओलीको पुत्ला दहन हुने वित्तिकै प्रशासनले थप उछृङखल गतिविधि हुन नदिन सुरक्षा अवश्यक मात्रमा सुरक्षाकर्मी परिचालन गरेकाे छ।
काभ्रे नेविसंघका अध्यक्षले कुकुर पुजाको दिन समाजिक सञ्जालमा प्रधानममन्त्री ओलीको विरोधमा कुकुरसँग जोडेर पोष्ट गरेको तस्विर र स्टाटस्का कारण उनलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको थियो ।
ढकालले अन्जानमा सेयर भएको भनेर माफी माग्दासमेत हिरासतमा राखिएकोले यस्ताे कदम उठाउनु परेकाे सभापति महरले बताए।
उनले भने, ‘कात्तिक २० गते अरुले हालेको फोटो सेयर गरेका नेविसंघका नेतालाई सरकारका सञ्चारमन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाको ठाडो आदेशमा पक्राउ गर्न लगाईएको छ, अन्जानमा भएका कुरालाई समेत यति ठूलो विषय बनाएर सरकारविरुद्ध आलोचना गर्दा सहन नसक्ने स्थितिमा पुगेको प्रमाणित गरेको छ।’
उनले भने,‘सरकारलाई हामीले सर्वसत्तावादको बाटोमा जाँदैछ भनेका थियौँ, आज नेविसंघ काभ्रेका नेतालाई पक्राउ गरेर त्यो चरित्र उदाङ्गो भएको छ ।’